Banaanbaxii Biri dhici lahaa oo la baajiyay.
Ugaas Maxamuud Cali Ugaas oo hoggaaminayay qaar ka mid ah oday dhaqameedyada iyo Guddigii qaban qaabada bannaan baxa berri dhici lahaa ayaa isku afgartay in dib loo dhigo bannaan bixii loo balansanaa.
Ugaaska ayaa ku guuleystay dadaalo uu saacadihii la soo dhaafay uu waday, isagoo gogol u dhigay dhinacyadii ku lugta lahaa qaban qaabada bannaan baxa, si aanay magaalada qalalaase ka dhasha bannaan baxa uga dhicin.
Cabsi xoogan ayaa jirtay Maalmihii la Soo dhaafay waxaana Shacabka Muqdisho ay ka Cabsi qabeen in isku dhacyo ay ka dhacaan Ciidamada
« Wasaaradda Amniga Soomaaliya oo fasaxay Banaanbaxa Biri ay qabanayaan Mucaaradka.
Musharaxiinta oo ka hadlay Banaanbixii baaqday iyo Hadalkii Cali yare »